Ii-FAQs -I-Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Q1: INGABA NDIYAFUNA UKUYALELWA KWENKONZO YOKUZALISEKA?
-> Ngaba ungaphandle kweTshayina kodwa usuka e-China?
-> Ngaba ufuna inkxaso yonxibelelwano nabavelisi baseTshayina?
-> Ngaba ukhathazekile yimisebenzi yokugcina impahla kunye nezinto zokusebenza?
-> Ngaba ujonga inkonzo efikelelekayo?
-> Ngaba uyafuna ukukhula umthamo ukusuka kwi-10 ukuya kwi-10,000 ngenyanga?
Ukuba ewe, ngoko ukuzalisekiswa kwe-Sunsonexpress sisisombululo esisilumko kuwe.
Q2: LININI IXESHA ELILUNGILEYO LOKUGQIBELA UKUZALISEKA KWEENKQUBO?
Nokuba uyinkampani yokuqalisa okanye inkampani evuthiweyo, ukuba ufumene ukhathazekile yimisebenzi yokugcina, iindleko zokugcina (kubandakanya indleko zabasebenzi kunye nerenti), ngakumbi xa abasebenzi bakho besebenza nzima usuku lonke kodwa basenomva ii-odolo, kwaye ukongeza awunaxesha lokugxila kuthengiso lweshishini lakho, lixesha lokuba uqaphele ukuba kungafuneka ukhuphe i-odolo yakho kwaye unike ingqalelo ngakumbi kweyona nto ibaluleke- ishishini. Ukubonelela ngokufezekisa iodolo sisigqibo esiliqili esenza ingqiqo ekukhuleni kweshishini. Nanini na xa iodolo yakho yeodolo ingaphezulu kwento onokuyiphatha, nceda unxibelelane ne-Sunsonexpress Inzaliseko ilindele kwaye uxoxe ngendlela esinokukunceda ngayo ekukhuliseni ishishini kunye nedumela lakho. Sinamava atyebileyo ekuthengiseni umda we-e-commerce kunye nolungiselelo olunokuthi ngokuqinisekileyo luncede ishishini lakho liye kwinqanaba elilandelayo.
Q3: INDLELA YOKUKHETHA INKAMPANI YOKUZALISEKA OKUFANELEKILEYO?
Xa ujonge ukukhupha iinkonzo zakho zokufezekisa, kuya kufuneka ujonge ezi zinto:
Ulwakhiwo lwamaxabiso: Cinga ukuba loluphi uhlobo lwezinto (ubukhulu, ubunzima, icandelo lemveliso njl.njl.) Othengisayo kwaye luyintoni uhlahlo-lwabiwo mali lwakho njengoko kuya kufuneka uhlawule umrhumo ngokusekwe kubungakanani kunye nobunzima bezinto ezithunyelwayo. Kwaye kufuneka wazi ukuba zeziphi iindleko zokugcina uluhlu lweempahla kunye nokukhetha kunye nokupakisha izinto zakho. Nayiphi na imali efihliweyo kunye nekhontrakthi yexesha elide njl.
Iinketho zokuhambisa ngenqanawe: Ukuba uthengisa kumazwe aphesheya, kuya kufuneka uqiniseke ukuba inkampani yokufezekisa iyakwazi ukuhambisa kumazwe aphesheya.
Indawo yokugcina: Jonga ukuba iziko lokufezekisa lifumaneka kwindawo "ekunene" njengoko uzakufuna ukuba uluhlu lwakho luqokelelwe yinkampani yokufezekisa okanye ithunyelwe ngumenzi ngexabiso elifikelelekayo. Kananjalo ukuba indawo yokugcina ikufuphi kwisikhululo seenqwelomoya, iluncedo olukhulu ukulungiselela ukuhanjiswa okukhawulezayo kokuphelisa abathengi.
Inkxaso yoMthengi: Xa kukho into engahambanga kakuhle ngexesha loku-odola, ukufezekisa kunye nenkqubo yokuhanjiswa, ungathanda ukuthetha nomntu kwaye ubhenele kwinkxaso, le yinkonzo esisiseko ekufuneka ibonelelwe. Kananjalo, ukuba inkampani yokufezekisa inokubonelela ngenkonzo yokuthengisa emva kokuphela komthengi (umz. Ii-odolo zokulandela umkhondo) egameni lakho, eso sisibonelelo esiphambili kuwe sokufumana inkonzo yasimahla.
Umdibaniso: Kuba usebenzisa umboneleli weqela lesithathu, jonga nje ukuba ngaba inkqubo yabo sele idityanisiwe okanye ingadibananga neenkqubo zakho ezikhoyo njengevenkile yakho yewebhu, iindawo zentengiso ezinje ngeAmazon, i-ERP, okanye nawaphi na amanye amaqonga. Kananjalo kufanelekile ukuba ivumeleke ukuba ibe nokubonakala okupheleleyo kuhlolo lwempahla kunye nenkqubo ezalisekayo ngalo naliphi na ixesha naphi na.
Zonke ezi zinto zingasentla ziyinxalenye yenkonzo yokufezekiswa kwe-Sunsonexpress ebonelelweyo.
I-Q4: NDINGA FUMANA IINKCUKACHA ZAM ZE-AKHAWUNTI NGEXESHA LOKWENZA KWI-WEBHU?
Ewe. Inkqubo ye-Sunsonexpress ivumela bonke abasebenzisi be-24/7 ulwazi lwexesha lokwenyani kunye nolawulo olupheleleyo kuluhlu lweempahla kunye nolawulo lweodolo.
Q5: Loluphi uhlobo lwenkonzo onokubonelela ngayo?
Sinikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo esikholelwa ukuba sinokuzanelisa iimfuno zakho ezahlukeneyo kumxokelelwano wokubonelela.
INkonzo yokuZalisekiswa kweNdawo yokuGcina iquka ukufunyanwa, ukugcinwa, ukukhetha kunye nokupakisha.
Inkonzo yokuhambisa ngenqanawa evela e-China ngeenkonzo zePosi, iinkonzo eziphambili ze-Express zamazwe aphesheya, iindlela zethu zokuzibandakanya ezinikezelweyo, imigca yokuhambisa ye-FBA, inkonzo yokuthumela iimpahla, ukuhambisa ngenqanawa, inkonzo yearhente yokuhambisa ngenqanawa.
Uncedo lwenqanawa yokuhambisa inqanawa ibandakanya ukuphinda usebenze kwakhona, ukudibanisa, iilebheli, indibano, njl.
Inkonzo ye-4 yokongeza: ukubetha, uphawu, ukudityaniswa kwevenkile.
5.Products nokufumana nokuthenga.
6.Iarhente yentlawulo yeempahla zakho.
Q6: Ngaba indawo yethu yokugcina ikhuselekile? Ngaba siyayibonelela ngeinshurensi kwiimveliso zethu?
Ngeempahla ezininzi kangaka esizikhathaleleyo okanye esizigcinileyo, asinakukwazi ukuphulukana nazo.
Indawo yethu yokugcina izinto ixhotyiswe ngeenkqubo zokucima umlilo kunye nokujonga kunye nokulawula ukufikelela iiyure ezingama-24 ukuqinisekisa ukhuseleko lweemveliso zakho. Abasebenzi bethu abanamava kwindawo yokugcina izinto baqalise ngenkqubo yokulungelelanisa ukupakisha ukuthintela izinto ezilahlekileyo okanye ezonakalisayo ngexesha lokuphatha. Kwimeko enqabileyo yezinto ezilahlekileyo okanye ezonakeleyo, iimveliso zakho zihlala zikhuselwe ngexabiso lemveliso. Intlawulo ye-inshurensi yi-0.1% ye "Ixabiso leMveliso" (eyona ndleko) yeemveliso zakho zonyaka ngamnye.
I-Q7: Ngaba uyakwamkela ukuthunyelwa kwempahla enobuthathaka?
Ewe, sinokwamkela ukuthunyelwa kwebhetri, ulwelo, izithambiso, umgubo, njl.
I-Q8: Ndingayihlawula njani imali yokuthumela okanye ezinye iindleko zenkonzo? Ngaba kufuneka ndihlawule ezi ntlawulo?
Ewe kuya kufuneka uhlawule ezi mali. Unokwenza intlawulo kuthi ngokuthumela, ukudlulisa ibhanki, ukuhambisa ngocingo, ikhadi lekhredithi, iPayPal njlnjl emva kokufumana intlawulo yakho, iakhawunti yakho enathi iya kufakwa kwimali efanayo. Emva koko, siya kutsala imali kwiakhawunti yakho ngokuzenzekelayo nanini na xa sikuthumelela iipasile okanye sikunika iinkonzo. Ukuthintela ukulibaziseka kokuthunyelwa kunye neenkonzo, luxanduva lwakho ukuqinisekisa ukuba kukho imali eyaneleyo kwiakhawunti yakho. Unokungena ngemvume kwinkqubo yethu ukujonga iinkcukacha zentengiselwano kunye nokulingana kweakhawunti yakho.
I-Q9: Ngaba ungandinceda ndithenge kubathengisi baseTshayina?
Siyazi ukuba abanye abathengisi baseTshayina abayamkeli intlawulo yangaphandle. I-Sunsonexpress inokubonelela ngenkonzo "yobuqu", inoku-odola kwaye ikuhlawulele.
Siyazi kwakhona ukuba abanye abathengisi baseTshayina abazithumeli iimpahla ngaphandle kwe China. I-Sunsonexpress inokubonelela ngenkonzo yokuhambisa izinto ezizezakho ozithengayo kwiiwebhusayithi zaseTshayina. Nceda unxibelelane nathi nge-imeyile: Andy@sunsonexpress.com
Q10: Dibanisa iiphakheji ezininzi kunye nokudlulisa njengephakheji enye?
I-Sunsonexpress inikezela ngenkonzo yokudibanisa. Ukuba uthenga kubanikezeli ngeenkonzo ezahlukeneyo, singabalinda bonke ukuba bafike emva koko babathumele kwibhokisi enye.
Q11: Uhlawula njani?
Asithumeli i-invoyisi emva koko silinde intlawulo yakho. Sisebenzisa inkqubo ehlawulelwa kwangaphambili. Ungafaka imali kwiakhawunti yakho ye-Sunsonexpress kwaye inkqubo yethu iya kuthi izitsalise ngokuzenzekelayo kwiakhawunti yakho. Ungaqinisekisa konke ukuthengiselana kwemali xa ungena kwiziko lethu lomsebenzisi. Imali eseleyo kwi-akhawunti yakho iya kusetyenziselwa unaniselwano lwexesha elizayo. Luxanduva lwakho ukuqinisekisa ukuba kukho imali eyaneleyo ukuthintela ukuphazamiseka kwenkonzo. Unokongeza iakhawunti yakho ngePayPal. Ukungenisa ngokukhuselekileyo intlawulo,
Zimbini iindlela onokuthi uhlawule ngazo / ukongeze iakhawunti yakho:
Ukutshintshwa kwebhanki: Nceda uphawule i-ID yakho yomsebenzisi we-Sunsonexpress xa usongeza phezulu ngokuGqithisela iBhanki, ukuze sikwazi ukubona intlawulo kunye neakhawunti yakho ngokufanelekileyo.
2.Iakhawunti yePayPal: Nceda ufake imali ngqo kwinkqubo yethu. Inkqubo yethu iya kutyala iakhawunti yakho kwi-RMB ngesixa osifumeneyo. Nceda uqaphele ukuba intlawulo yokuphathwa kwePayPal xa ugqithisela intlawulo kuthi. Ukongeza, siza kutsala i-2.5% yemali yokutshintshiselana ngayo yonke imali yelinye ilizwe ngaphandle kwe-HKD.
3.Uhlawulela. Nceda ufake imali ngqo kwinkqubo yethu.
1. Siza kwenza ikhredithi kwiakhawunti yakho ngokubhekisele kwinto esiyifumeneyo. Ngokubanzi, iya kuba sisixa osithumeleyo thabatha umrhumo wentengiselwano yePayPal.
2. Ukuba uthumela nge-USD, siya kuyiguqula ibe yi-RMB kunye nekhredithi yeakhawunti yakho.